Ngabe ishaja esheshayo izolimaza ibhethri? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ngabe i-ishaja esheshayoukulimaza ibhethri?
Eminyakeni yamuva nje, ukwakhiwa kwamafoni omakhalekhukhwini sekushesha kakhulu, futhi ukushaja nakho kuyathuthuka njalo, kusukela ekwakhiweni kwamashaja ajwayelekile kuzo zonke izinhlobo zokushaja okusheshayo nokushaja i-flash, kepha ukusetshenziswa kwamashaja bekulokhu kuyinto evamile I-China, kepha amashaja angasetshenziswa ngokungakhethi. Ingabe kunjalo?
Ngokombono wepulagi yokushaja, isimiso sokushaja esisheshayo sokushaja okusheshayo nokushaja i-flash kuyefana, kepha izindlela zihlukile. Phakathi kwabo, ukushaja okusheshayo okuvamile ukukhulisa amandla okushaja omakhalekhukhwini ngokwandisa isithombe sevolthi yokushaja, ukuze kube Nokwehlisa isikhathi sokushaja umakhalekhukhwini, omakhalekhukhwini abaningi basebenzisa lobu buchwepheshe. Kodwa-ke, ukushaja i-flash isebenzisa i-voltage ephansi namandla wamanje aphezulu ukusheshisa isivinini sokushaja sefoni ephathekayo. Ngakho-ke, ama-plugs ala amashaja amabili akufanele asetshenziswe ngokungakhethi. Uma zisetshenziswe ngendlela engafanele, ibhethri lizolimala ngezinga elithile.
Uma ubheka ikhebula ledatha lokuqala lesokhethi le-trapezoidal, lingamelana ne-3A kuphela, futhi lizokhiqiza ukushisa uma lidlula i-2A, ngakho-ke ukukhokhiswa okusheshayo kwesokhethi le-trapezoidal kungu-9V / 2A kuphela, ngakho-ke kufanele kunakwe kakhulu okunye ukushaja okuncane kakhulu Noma isokhethi lale khebuli yokushaja libuye libe yi-trapezoidal, alikwazi ukusetshenziselwa ukushaja okusheshayo, kulula ukushisa kakhulu, futhi akukuhle ngamabhethri omakhalekhukhwini. Ngokukhulumayo, ikhebula ledatha le-TYPE-C lingamelana nomthamo ophakeme ka-5A, futhi amandla amakhulu kakhulu nawo ayanda. Ku-20V, ukuphepha kuphakeme kakhulu.
I-30W PD entshaishaja esheshayokusuka ku-CTC Connexions, ngomsebenzi wokushaja okusheshayo okungu-3.0, kungahlangabezana nezidingo zakho zokushaja okusheshayo.
Ingabe kunesidingo ukukhetha ubude bekhebula le-HDMI?